by UKelli Mahoney
IBhayibhile isitshela ukuba ububele kubalulekile. Sekunjalo sonke siyazi ukuba kukho amaxesha apho imfesane engekho phambili kwizinto eziza kuqala. Nangona kunjalo, akufanele siphume kwi-mfesane yethu. Inxalenye yento evumela ukuba sidibanise nabanye. Nanku umthandazo ocela kuThixo ukuba asenzele imfesane ngakumbi kwimpilo yethu yemihla ngemihla:
Nkosi, bulela ngako konke ondikwenzayo kum. Ndiyabulela ngamalungiselelo akho ebomini bam. Undinike kakhulu kangangokuba ngezinye iindlela ndiziva ndichithekile kuwe. Ndiziva ndithuthuzelwa kwaye ndinyamekelwa nguwe. Andikwazi ukucinga ubomi bam nganoma iyiphi enye indlela. Usikelele ngaphezu kwento endiyicinga ngayo, nangona andifaneleki zonke ezi ntsikelelo. Ndiyabulela ngaloo nto.
Yingakho ndikho ngamadolo phambi kwakho namhlanje. Ngamanye amaxesha ndivakalelwa kukuba ndithatha ilungelo lam, kwaye ndiyazi ukuba ndifuna ukwenza okungakumbi kwabo bangenayo into ebomini bam. Ndiyazi ukuba kukho abo abangenawo uphahla phezu kweentloko zabo. Ndiyazi ukuba kukho abo bafuna imisebenzi kwaye bahlala besaba ukulahlekelwa yinto yonke. Kukho abahluphekileyo nabakhubazekile. Kukho abantu abanesizungu kunye nabantu abanesiphene abanesidingo sam velwano.
Kodwa ngamanye amaxesha ndiyalibala ngabo. Nkosi, ndiza phambi kwenu namhlanje ukukubuza ukuba ndikhumbule ukuba andinakukugxotha abahlwempuzekileyo nabanyanzelisiweyo behlabathi. Ucela ukuba sikhathalele omnye umntu. Ucela ukuba sinakekele abahlolokazi neenkedama. Uyasitshela kwiLizwi Lakho ngenyameko kunye nokuba kukho abo banesidingo esikhulu solu uncedo esingafanele siwahoye. Nangona kunjalo ndivakalelwa ngamanye amaxesha. Ndiyifumene kakhulu ebomini bam ukuba abo bantu babe lula ukugxotha ... phantse abangabonakaliyo.
Ngoko Nkosi, nceda uvule amehlo am. Nceda ndibone abo bendizungezile abafuna imfesane. Ndiphoqele ukuba ndibaphulaphule, ukuva iimfuno zabo. Ndiphe intliziyo ukuba ibe nomdla kwiintlungu zabo kwaye ndibonelele iindlela zokubanceda. Ndifuna ukuba nemfesane. Ndifuna ukuba njengawe obenemfesane eninzi kwihlabathi ukuba wambingelela uNyana wakho emnqamlezweni kuthi. Ndifuna ukuba nelo hlobo lwenhliziyo kwihlabathi lokuba ndiza kwenza konke okusemandleni ukuba ndibe ngumntu ocinezelekileyo, unika abahluphekileyo kunye nokukhuthaza abakhubazekileyo.
Yaye, Nkosi, masibe lizwi lokuqiqa kwabo bajikelezile, ndibabiza ukuba babonise imfesane yabo, nabo. Makhe ndibe ngumzekelo kuwe. Makhe ndibe ukhanyiso ababonayo ukuze Ufike. Xa sibona umntu osweleyo, wabeka loo mntu entliziyweni yam. Vula iintliziyo zabantu abakujikelezile ukuba benze umhlaba olungcono ngokubonelela abo abangenakuzinakekela.
Nkosi, ndinqwenela kakhulu ukuba nemfesane. Ndifuna ukuqaphela abo banesidingo. Ndifuna ukuba neendlela zokuncedisa. Makhe ndiwanike abo bangenalo ilungelo njengami. Ndiphe ithemba kwizenzo zam ukuze ndikwazi ukubuyisela. Makhe ndivulekele ingcamango yam ukuze ubunzima endingayidingayo bukwazi ukuhamba ngokulula kwaye kungadityaniswa. Makhe ndibe oko abanye bakudinga, Nkosi. Yonke into endiyicelayo. Ndisebenzise njengesitya se mfesane kwihlabathi elidinga.
Kwigama lakho elingcwele, Amen.
'Uthando Luyasineke, Uthando Lwunomusa' Ivesi leBhayibhile
IBhayibhile YeBhayibhile Ngamandla
Umama onosiko uNovena
Imithandazo kaMeyi, iNyanga yeNtombikazi kaMariya
Imithandazo Eyishumi Wonke umntwana ongumKatolika kufuneka awazi
Umthandazo Wasendulo kuSaint Joseph
Imithandazo neendinyana zeBhayibhile zokunceda ngokuxhalabisa nokuxinezeleka
Imithandazo yamaKrestu kuMoya oyingcwele ukuze uzuze
Yiyiphi iSigqeba esiGqeba seGalofu?
IiHack Hiking: Iindlela ezine ongasebenzisa iBanana
Uthelekiso lweeNtlobo ezintathu zeeNkampani zoRhwebo
Imfazwe Yemfazwe Yomkhosi kaRobert E. Lee
Izinto ezi-5 eziphezulu zokuzicingisisa ngaphambi kokuba ube nguTitshala
I-Biography: uThomas Joseph Mboya
UHaretet Spy nguLouise Fitzhugh
Ngubani owafaka i-Butter Peanut?
Uninzi olunjani ukuhamba kweeGreen kwiGalofu?
Indlela yokuvavanya imoto yakho yeCigarette Lighter okanye I-Accessory Socket
Ukuziqhayisa Ukuxubusha Ikhumba
Ukukhetha Isitayela somdaniso
Toltec Thixo neNkolo
15 Amagama Aya Kukukwenza Unqabile
Porsche, Porsche, Porsche !: Imbali ye-Porsche Inkampani
IiWebhsayithi eziLungileyo zeJamani zaBantwana kunye nabaselula
Indlela yokunyuka ii-Chimneys
Indlela yokudibanisa "u-Établir" (ukuseka)
I-Creationists ichaza njani iDinosaurs?
I-George Carlin Quotes yexesha lonke
IYunivesithi yaseGreat Falls Admissions
Umbulali Whale okanye i-Orca (Orcinus orca)